Sida loo raadiyo sawiro bilaa asal ah Google: casharka aasaasiga ah iyo codsiyada | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sida Google looga Raadiyo Sawirada Aan asalka lahayn
Nerea Morcillo | | General, Tababarada
Google-ka kaliya ma raadin kartid sawirada waxa aad jeceshahay, laakiin sidoo kale, bogag badan oo shabakad ah ayaa naqshadeeya sawirro aan asal lahayn ama loo yaqaan PNG, halkaas oo aad u isticmaali karto mashaariicdaada. Marar badan waxaan soo dejinnaa sawirada, waxaan u maleyneynaa inay yihiin kuwo aan gunno lahayn laakiin markaan tagno inaan galno ama dhigno faylka, waxaan helnaa yaabab xun.
Haddii aad sidoo kale daalan tahay ama aad daalan tahay tan oo kale, qoraalkan, waxaan kaa caawineynaa inaad hesho sawiradaas aad raadineyso. Waxaan casharkan gaaban ku sharixi doonaa sida loo helo sawirro aan asal lahayn Google Intaa waxaa dheer, waxaanu kuu soo jeedin doonaa taxane codsi ah si aad u abuurto PNG adiga kuu gaar ah. Sidan, waxaad had iyo jeer ku heli doontaa waxaad rabto iyada oo aan dhib iyo yaab lahayn.
1 Waa maxay sawirka PNG
2 Casharrada lagu baadho sawirada Google-ka oo aan asal lahayn
3 Codsiyada Sawirka PNG
Waa maxay sawirka PNG
Faylka PNG (Garaafyada Shabakadda la qaadi karo), waa nooc aad u gaar ah oo qaab muuqaal ah. Waa qaabka u beddelaya sawirada hufnaantaas taas oo loo baahan yahay in la geliyo asal kasta. Qaabkan waxa lagu gartaa in aanu ku jirin khasaare, tani waxa ay la macno tahay in sawirku aanu lumin tayada balse waxa uu u beddelayaa qayb gaar ah.
Waa fayl inta badan loo isticmaalo sawiro, boggaga internetka, warbaahinta xayeysiiska sida boodhadhka, boodhadhka, aqoonsiga shirkadda, iwm. Marka la soo koobo, haddii waxa aad u baahan tahay ay tahay inaad dhigto calaamad meel kasta oo dhexe ah iyada oo aan asalkiisu qaboojin mashruucaaga, waa qaabka qeexan ee kaa caawin doona inaad buuxiso wax kasta oo aad u baahan tahay. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale ka heli kartaa qaabkan bangiyada sawirada gaarka ah.
Tilmaamaheeda waxaa ka mid ah:
Waxay awood u leeyihiin inay ku shaqeeyaan sawirro monochrome ama madow iyo caddaan ah kaas oo u ogolaanaya in lagu sameeyo profiles midab kala duwan. Sidoo kale, haddii aad samaynayso mashruuc aad isticmaalayso madow iyo caddaan oo kaliya oo aad u baahan tahay sawirada PNG oo leh firfircooni, waxaad ku samayn kartaa dhibaato la'aan. Waxa kale oo jirta suurtogalnimada in summada loo beddelo qaabka PNG labadaba togan iyo kuwa taban.
Maaddaama ay tahay qaab hawshiisu ay ku jirto hufnaantiisa, waxa kale oo lagu gartaa in uu awood u leeyahay in uu taageero kanaalada hufan. taas oo noo horseedaysa sharraxaadda sababta qaababkani u oggolaanayaan in sawirka loo soo bandhigo oo kaliya si dabiici ah, asal dhexdhexaad ah ma jiro.
Waxay leedahay faham ka wanaagsan qaabka GIF, taas oo noo horseedaysa inaan ku fekerno inay sidoo kale taageerto sawirro tayo sare leh oo leh tiro sare oo pixels ah.
Ma aha oo kaliya in ay bixiso suurtogalnimada in ay noqoto mid hufan hal qaab ama qaab, laakiin sidoo kale waxay bixisaa habab kala duwan oo daahfurnaan ah, taas oo na siinaysa doorashada inta u dhaxaysa fursadaha suurtogalka ah.
Es qaabka ugu habboon ee qaabeynta buugaagta halkaas oo vectors ama sawiro tayo leh loo baahan yahay in la simo. Marka la soo koobo, PNG waxay ku badbaadin kartaa daqiiqado badan halkaas oo naqshaduhu u baahan yihiin sawir aan asal lahayn iyo halka mashruucaagu u baahan yahay inuu ku dhejiyo sawir dhamaystiran.
Haddii aydaan ogeyn, kordhintiisu waa .png oo waxaad ka heli doontaa mar kasta oo aad soo dejiso sawir.
Casharrada lagu baadho sawirada Google-ka oo aan asal lahayn
Xigasho: support google
Source: maalinta 8 advertising
para Ka hel sawirro aan asal lahayn google-ka kumbuyuutarka waa inaad raacdaa dhowr tilaabo oo fudud:
Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doono waa furaha browserka, Waxay noqon kartaa Firefox ama xitaa chrome, laakiin waxay noqon doontaa lagama maarmaan in mashiinkaaga raadinta uu yahay Google, gaar ahaan. Marka aan horay u furnay, barta raadinta, waxaan ku qori doonaa magaca sawirka aan rabno inaan raadino, tusaale ahaan "tulips".
Marka aan meel dhigno ereyga, waxaan isu diyaarin doonaa inaan riixno geli isla markiiba Google-ku wuxuu raadin doonaa sawirro la xidhiidha waxa aanu qornay. Marka baaritaanka aan sameynay uu soo baxo, waxaan aadi doonaa ikhtiyaarka sawirada y waxaan ku gali doonaa gujin kaliya.
Marka dhammaan sawirada tulips ay muuqdaan, kaliya waa inaan tagnaa ikhtiyaarka qalabka Marka aan galno, nooc ka mid ah menu oo leh doorashooyin kala duwan ayaa isla markiiba soo muuqan doona, dhammaan xulashooyinka soo muuqda, waxaan ku heshiin doonnaa inaan gujino ikhtiyaarka midabka.
Marka aan helno ikhtiyaarka midabka, waxaan aadi doonaa xulashada midabka. hufnaan ama hufnaan gujinaya doorashadan Waxaan ku siineynaa inaad google sameyso raadinta sawirada tulips oo leh asal hufan kuwaas oo laga heli karo internetka.
Haddii waxa aan rabno waa in aan ku samayno qalabkayaga mobaylka waa inaan raacnaa talaabooyinka soo socda:
Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doonno waa soo dejinta Google-ka, marka aan soo dejino oo aan rakibno Waxaan furi doonaa makiinadda raadinta oo ku qori doona isla ereyga aan horey u soo qornay "tulipanes" dhamaadka ereyga waxaan ku dari doonaa kordhinta PNG, waxaan yeelan doonaa tusaale sidan oo kale ah: Tulipanes PNG.
Raadintan, Google ayaa ku tusi doonta sawir kasta oo tulips ah oo noqon kara PNG. Haddii waxa aad rabto ay tahay inaad soo dejiso sawirka PNG oo aan lahayn asal, kaliya waa inaad gujisaa sawirka. Aad uga taxaddar qaybtan habka maxaa yeelay si ay dhab ahaantii u noqoto PNG waa inay lahaataa labajibbaaran cawl iyo caddaan ah.
Markaan hore u haysanno sawirka la doortay oo gujinaya, ikhtiyaarka soo dejinta sawirka ayaa soo muuqan doona, waanu ogolnahay inaan soo dejinno oo si toos ah ayaad u geli doontaa gallery ama galka wax-soo-dejinta ee qalabkaaga.
Codsiyada Sawirka PNG
Freepik waa mid ka mid ah bangiyada sawirada ugu caansan ee internetka. Waa qalab fiican haddii aad ka shaqeyso naqshadaynta garaafyada ama qaybta sawir qaadista oo aad u baahan tahay inaad soo dejiso faylal qaab PSD ah (Faylka asalka ah ee Photoshop). Wax yar ayaa og waa in sidoo kale ay suurtagal tahay in lagu sameeyo sawirro leh kordhin PNG.
Intaa waxaa dheer, waa codsi lagu garto bixinta kheyraadka leh tayada sare ee muuqaalkiisa. Waa ikhtiyaarka ugu fiican haddii waxa aad u baahan tahay ay yihiin sawirada PNG ama aad ku abuurto majaajilo gudaha Photoshop. Xaqiiqda muhiimka ah in la xuso ayaa ah in kaliya ay kuu ogolaaneyso inaad soo dejiso shan sawir oo lacag ah haddii aadan is diiwaan gelin oo aad soo gasho marti ahaan, markaa waxay leedahay kharash bishiiba iyadoo ku xiran nooca sawirka aad doorato.
Freepng waa mid ka mid ah makiinadaha raadinta ugu muhiimsan uguna caansan ee sawirada qaabka PNG ee internetka. Marka laga soo tago inuu yahay qofka loogu doonista badan yahay. waxay ka kooban tahay noocyo badan oo noocyo kala duwan ah oo sawirradeeda ah: ciyaaraha, nashqadaynta, farshaxanka, cunto karinta, naqshadaha, xayaysiinta iwm.
Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan mashiinka raadinta waa in aysan ku jirin oo kaliya suurtagalnimada soo dejinta sawirada laakiin sidoo kale calaamadaha mashaariicdaada. Marka la soo koobo, haddii waxa aad raadinayso uu yahay browser dhamaystiran oo leh doorashooyin kala duwan oo kala duwan, waa qalabkaaga ugu fiican. Intaa waxaa dheer, doorashooyin badan ayaa gebi ahaanba bilaash ah, taas oo ka dhigaysa mid soo jiidasho leh.
Pixabay waa madxafka sawirada online-ka ah iyo sababta loogu qeexay inay tahay madxafka weyn?Hagaag, ma jiraan wax dheeraad ah iyo ma yara sababtoo ah wuxuu leeyahay guud ahaan 900.000 sawiro bilaash ah, Haa, markaad akhrido, 900.000 oo sawiro iyo muuqaalo bilaash ah oo aad ku soo dejisan karto hal gujin oo keliya.
Iyada oo leh hal 2000 oo fayl ah oo leh kordhinta PNG si aad u soo dejisan karto oo aad u isticmaali karto arrimo ganacsi, naqshad iwm. Markaad ka kooban tahay sawirro badan, waxaad horeyba u heli kartaa fikrad yar oo ah qaybaha badan ee ay leedahay, maadaama ay leedahay qaybo badan oo hoosaadyo ah oo dhammaan sawirada la qaybiyo.
Waa shaki la'aan codsiga ugu habboon.
StickPng waa mid ka mid ah bangiyada sawirka PNG ee sida aadka ah loo isticmaalo. Waxay leedahay in ka badan 1000 sawir si loo soo dejiyo mid walbana wuxuu leeyahay tayada ugu wanaagsan ee mashaariicdaada. Intaa waxaa dheer, waxa ay sidoo kale leedahay suurtogalnimada in lagu soo dejiyo lacag la'aan iyo sidoo kale waxay leedahay ikhtiyaarka soo dejinta stickers iyaga ay naqshadeeyeen.
Waa aaladda ugu fiican ee lagu dari karo taabashada madadaalada iyo farxadda mashaariicdaada. Intaa waxaa dheer, waxa ay sidoo kale leedahay in ka badan 2000 oo qaybood, taas oo macnaheedu yahay in aad lumiso mid ka mid ah doorashooyin badan oo suurtagal ah iyo bixinta shaqadaada taabashada kala duwanaanta sidoo kale.
Haa, khalad uma aadan akhriyin, Adobe Photoshop waxay fursad u leedahay inaad sawiradaada ku abuurto PNG. Tani waa suurtogal iyada oo ay ugu wacan tahay aaladda tirtirka asalka ah iyo beddelkeeda tooska ah ee PNG. Waa shaki la'aan xulashada xiddiga iyo Midka ku badbaadin kara haddii aad u baahan tahay PNG degdeg ah.
Khasaaraha kaliya ayaa ah inay u baahan tahay kharash bille ah ama sanadle ah, sidaa darteed soo dejintu maaha bilaash laakiin uma baahna kharash xad dhaaf ah sidoo kale. Isku day Photoshop oo naftaada la yaab qalabkan iyo fursadaha kala duwan ee ay sidoo kale bixiso.
Soo dejinta sawir leh asal hufan hadda ma ahan hawl adag, iyadoo ay ugu wacan tahay xulashooyinka la sameeyay sannadihii ugu dambeeyay. Taasi waa sababta aan u rajeyneyno inaad baratay raadinta sawirada PNG iyo, dhammaan, waxaan sidoo kale rajaynaynaa in codsiyada aan soo jeedinnay ay adiga waxtar kuu leeyihiin.
Habka PNG wuxuu had iyo jeer ahaa mid ka mid ah qaababka ugu isticmaalka badan sababtoo ah sifooyinka ay bixiso. Ugu dambeyntii, waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay qaabkan gaarka ah iyo in hadda laga bilaabo raadinta muuqaalkan aysan dhib kugu noqon doonin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida Google looga Raadiyo Sawirada Aan asalka lahayn
Qaababka Xirfadlayaasha PowerPoint